Ahịa akpaaka ahịa | Martech Zone
Neolane mepụtara ihe omuma a dika uzo di egwu nye ndi ahia ka ha nyochaa uzo ahia ahia. Ndị ahịa na-ewe ụzọ dị iche iche ịzụlite na ụzọ ụgbọ oloko a na-arụ ọrụ nke ọma iji hụ ha.
Usoro ụzọ ụgbọ oloko ọ bụla na-anọchi anya ụdị dị iche iche nke akpaaka ma gụnye ụzọ ndị a tụrụ atụ, ụzọ omume, ụzọ ọtụtụ mmetụ, ụzọ azụmahịa na ụzọ ime. Ọdụ ndị dị n'okporo ụzọ ndị ahụ na-akọwa ọtụtụ ụzọ ọkọlọtọ nke nzukọ gị nwere ike iji dị ka ntụpọ.
Tags: nnwetaomumen'imeAhịa akpaaka edemedeahịa akpaaka iheahịa akpaaka na-enyeArụ ọrụ akpaaka ahịamulti-akana-azụlite yazuberenjigideazụmahịa